जहाँ महिलाले गर्छन् पुरुषको बलात्कार ! • raradiodarpan.com
जहाँ महिलाले गर्छन् पुरुषको बलात्कार !
नेपाल, भारत लगायतका देशमा पुरुषले बलात्कार गरेर अत्याचार गरेका खबरहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहन्छन् तर यूरोपको एक देशमा भने महिला नै बलात्कारमा अगाडी छन् । पपुवा न्युगिनीमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ पुरुषले महिलाको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरे कडा कारवाही हुन्छ । पपुवा न्युगिनीको बसा गाउँका महिलाहरु पुरुषलाई सित्तैमा यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गर्छन् ।